सीमा मिचिदा चुइक्क समेत बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरि राष्ट्रवादी भन्ने ? : भिम रावल – Koshidaily
मुख्य पृष्ठराजनीतिसीमा मिचिदा चुइक्क समेत बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरि राष्ट्रवादी भन्ने ? : भिम रावल
सीमा मिचिदा चुइक्क समेत बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरि राष्ट्रवादी भन्ने ? : भिम रावल
काठमाडौँ, ३० वैशाख । नेकपाका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद माथि प्रश्न उठाएका छन् । नाकाबन्दीको समयमा देखाएको राष्ट्रवादलाई हेरेर नेकपालाई जनताले दुइतिहाई नजिम मत दिएपनि अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादले जनताले झुक्किएको महशुस गरिरहेको बताए।
पत्रकार ऋषि धमलासँग रेडियो एनआरएनसँग कुरागर्दै रावलले देशको नक्सा समेत सार्वजनिक गर्न नसक्ने नेतृत्वले राष्ट्रवादको कुरा गर्न नसुहाउने बताए । उनले जतिबेला भारतले सकड उद्घाटन गरेको खबर आयो, त्यही समयमा सरकारले भारतीय रादूतलाई बोलाएर कुटनीति नोट जारी गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कम्जोरी भएको बताए ।
सीमा मिचिएको जस्तो गम्भिर विषयमा हाम्रो राजनीातक नेतृत्व समेत सहि ढंगले उत्रन नसकेको भन्दै रावलले अहिले सम्म सीमाका विषयमा भारतमा रहेका नेपाली राजदुत र सम्बन्धि जिल्लाको सिडियो लाई समेत बर्तमान सरकारले के भएको हो भनेर सोध्ने काम समेत नगरेकाले सरकार भारतसँग कहि न कहि चुकेको देखिएको बताए ।
उनले एउटा देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारले कालापानीमा गएर सडक रोन सक्ने सम्भावना नहुने भन्दै यस्तो समयमा चुइक्क समेत बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रवादी भनेर कसरी भन्ने भन्दै प्रश्न गरे ।कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने सवै प्रमाण प्रधानमन्त्रीसँंग भएको रावलको दावी छ ।
रावलले भने,‘नेपाल भारत वा नेपाल चीनसंगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाउने छ । अन्र्तराट्रिय सम्बन्ध समितिले पर्खाल लगाउ कि काँडेतार लगाउ भनेर सुझाव दिइसकेको छ । सांसदहरुलाई दिएको रकम सीमा पालमुनि बसेका सुरक्षा कर्मीको सुरक्षामा लगाउनुपर्छ । चीनले पनि यसलाई त्रिदेशीय मार्ग भन्न मिल्दैन । भारतले जती मिचाहा प्रबृति चिनले देखाएको छैन ।